true marriage /zu-ZA/tools-for-life/marriage/steps/the-adventure-of-marriage.html read 1 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/marriage_zu_ZA.jpg Umshado
Ukushada kuyi adventure. Ngoba uma ushada, wenza into ongazi lutho ngayo. Futhi noma uyizama amahlandla ambalwa, imvamisa wazi okuncane ngakho okwesibili kunalokho owawukwenza okokuqala.
Umshado yinto umndeni owakhelwa phezu kwawo. Kuyinto isisekelo.
Kulo mphakathi, ngalesi sikhathi, umndeni uyiqembu elinakekelanayo, elizivikelayo futhi elikwazi ukuzithathela ikusasa.
Isiko (iqembu labantu abanezinkolelo ezifanayo, indlela yokuphila, amasiko, njll.) lizobhujiswa noma lilahleke uma i building block esiyisisekelo—umndeni—sisuswa.
Lobudlelwano bokugana i postulated budlwelano. Postulated kusho isinqumo esenziwe sokuthi okuthile kuyikhona noma okuzoba yindlela ethile. Ngamanye amagama, umshado uyinto abantu ababili badala ndawonye. Isinqumo abasithathile yiso kuphela isizathu sokuthi umshado ukhona.
Izinkinga ziqala lapho abantu beyeka ukudala (ukwenza noma ukubeka umsebenzi ku) noma postulating umshado. Futhi yilokho okwenzeka emishadweni eminingi. Abantu bayayeka ukudala iqembu lomndeni. Futhi lapho beyeka ukuwudala, umshado awusekho.
Isibonelo, thatha umbhangqwana, othatha ukuhamba olufushane kanye ngesonto epaki eliseduze futhi ukhulume njalo ngezinhlelo zawo, ezinjengokuthi bazohlobisa kanjani indlu yabo, bayithuthukise kanjani ingadi yabo noma basize izingane zabo ngomsebenzi wazo wesikole. Uma besebenza ezintweni ezinjengalezi, bayaxoxa bodwa ngokwakha ubudlelwano babo nekusasa lomndeni wabo. Kepha ake sithi ngolunye usuku bangena ebunzimeni bezezimali. Banquma ukuthi bamatasa kakhulu ekuhambeni kwabo kwesonto noma bazinike nesikhathi sokuxoxa bodwa ngezinhlelo zabo zekusasa. Lapho umyeni efika ekhaya, usebenzisa sonke isikhathi sakhe ephendula ama-imeyili futhi nkosikazi uchitha isikhathi sakhe esithe xaxa ebuka i-inthanethi ezama ukuthola izindlela zokwenza imali eyengeziwe ukukhokha izikweletu. Abaxoxi ngisho nezinhlelo zabo zokusebenzisa imali yabo ndawonye. Bayekile ukudala umshado wabo nomndeni. Kungasi kudala, ukugana usuphelile.
Akungenxa yezinto ezimbi ezenziwa abantu ezenza izivumelwano ezinjengomshado zihlukane, njengokuthi omunye wabalingani ubukhona ukhungathembeki futhi aqale ubudlelwane obufihlekile nomunye umuntu. Kungenxa yezinto abantu abangazenzi. Uma unobudlelwano obu postulated ngokuphelele, umele uqhubeke nokuidala. Kufanele uqhubeke ukubeka lapho ngezenzo zakho. Futhi umndeni ongaqhubeki nokudala iqobo njengomndeni uzoyeka ukuba khona njengomndeni. Lokho mayelana nento uyisisekelo nebaluleke kakhulu kudingeka uyazi ngayo.
Lapho abantu benenkinga khona ngomshado, yingoba balindele ukuthi kuqale ngokuzenzakalela. Bacabanga ukuthi kuzohlala ndawonye ngaphandle kwabo benza noma yini ukuyibeka lapho futhi bayigcine ndawonye. Ngeshwa, ngeke. Kufanele kudalwe.
Lapho ingane ingeniswa emndenini, nayo izoqala uku postuletha lo umndeni eqenjini. Uma abazali beyekile ukudala ukugana kwabo futhi iqembu umndeni sesiqala ukuwa ingane izozama zonke izinhlobo zezinto ukugcina iqembu lomndeni likhona.
Eqinisweni, kutholakale ukuthi esinye sezizathu umntwana azithola ezilimala ngazo ukwenza abazali bakhe babone ukuthi banemithwalo yemfanelo yomndeni. Ebuntwaneni ukugula nokulimala kuvame ukwenzeka ngqo ngemuva kokudabukela kumndeni.
Kodwa ngabe abazali bengane bahlala ndawonye noma behlukana, lokhu akuhlangene nekusasa lakhe nokuthi angakwazi yini ukwenza umshado ophumelelayo lapho esemdala. Impumelelo yomshado wakhe izoncika kuye ekuthatheni isinqumo bese esebenzela ukugcina leso sinqumo sisendaweni.
Uma unombono wokuthi umshado uhlelelwe ukuthi uphumelele ngokuzenzakalelayo futhi akudingeki wena uqobo ukuthi wenze noma yini ukuzama ukuwenza uqhubeke, kuzogcina isehluleki noma isehlukaniso. Kodwa uma ungena ekuganeni ngokuqonda ukuthi ukugana kuyinto okumele u postuletha ukuthi ube khona futhi uqhubeke nokudala, ungenza noma ikuphi ukugana uphumelele noma ugcine ngisho nokugana lokho kwehluleka.